Ma waxay isku darayaan teknoolojiyada cusub dharkaaga? | Ragga Stylish
Dhawaan ma jiri doonaan hadal kale oo aan ka ahayn teknoolajiyada la gashado. Laakiin maxay cadaabta yihiin? Waxay u egyihiin cunto dheeri ah ama buskud cusub si ay u lumiyaan miisaanka. Laakiin maya, oo kama hadlayno dharka mustaqbalka ee natiijada waallida hal-abuurka ah ee naqshadeeye aragti dheer.
(Haa, dhammaantood "aad u xiran karo")
Maya waxaan ka hadlayaa wax kale wax ku ool ah, waxa la raadinayo waa in lagu daro horumarkii ugu dambeeyay ee qalabkeena iyo in ay qeyb naga noqdaan sida xarkaha ama xirmooyinka. Isbadal ahaan, inbadan oo ka mid ah horumaradaan waxay horeyba u gaareen wadamada nagu hareeraysan waxeeyna dhawaan noqon doontaa wax aad u weyn. Dhab ahaan, Amazon UK horeyba waxay ufududay qayb kamid ah tikniyoolajiyaddan cusub taasoo mustaqbalka kadhigaysa wax laga heli karo guryaheena.
Laakiin bilic ahaan anigoo hadlaya, aad baan uga baqayaa naqshadda aaladahaas. Ma yihiin waxyaalo qarsoodi ah oo qarsoodi ah ama naqshadahoodu ma maareyn doonaan inay ku daraan xoogaa muuqaal ah dharkeenna?Miyaa si fudud loogu dhex dari karaa golahayaga? Qurxinta mustaqbalka ayaa had iyo jeer iga nixisa aniga oo madow, buluug shucuur leh iyo fiilooyin meel walba jooga.
(Halkan kan kaliya ee iftiimiyay mustaqbal xarrago leh oo hufan wuxuu ahaa Stanley Kubrick)
Laakiin ragga mustaqbalka waa halkan iyo kan Xirashada dharka iyagu waa tusaalaha ugu weyn. Tiknoolajiyadaan elektaroonigga ah waxaa lagu qeexay dhexgalaan dharka iyo qalabka waxayna rabaan in si raaxo leh loogu xirto jirkeena. Naqshadeedu waxay ka kooban tahay hawlo wax ku ool ah oo nolosheena aad uga fudud: ka jawaabista wicitaanada, gelitaanka internetka, tirinta kalooriyada ...
Sideen isugu dareynaa tan miyaa laga xishoon doonaa inaan xirano?
Waxaan falanqeynayaa seddex ka mid ah aaladaha aad dhawaan ka fikiri doonto inaad iibsato.
Marwalba waan fiicnaa cambaareyn waana ku qoslay mid kasta iyo kaftan kasta oo la sameeyay tan iyo markii ay Google ku dhawaaqday abuurkeeda. Si kastaba ha noqotee, aragtida wiilkan uma muuqato mid xun. In kasta oo ay igu adag tahay inaan jaleeco in maalin uun tani noqon karto "mood", goorma Luxottica, Mulkiilaha Ray-Ban iyo Oakley, sii nashqadaada naqshadeynta, waan hubaa inaan iibsan doono hadalladayda dhammaantoodna waxaan ku dhammaan doonnaa sidii Parker.
(Sarita had iyo jeer waa qaabkii ugu dambeeyay)
Sideen isugu dari karnaa?
Way cadahay in markay sii kobcayaan hoos loo dhigi doono cabirkooda oo naqshadayntu noqon doonto mid aad iyo aad u qurux badan oo yar. Qaabka ay hadda u leeyihiin looma tixgelin karo inay yihiin siyaado sida oo kale. Waxaan sugi doonaa inaan arko midkiinna noqonaya kii ugu horreeyey ee geesinimo ka qaada waddada.
Saacadaha casriga ah ayaa laga hadlay muddo dheer, laakiin kan ka mid ah Motorola qaadataa keegga. Runtii precioso.
Wareeggiisa, xarrago, bir, biyuhu, naqshadeynta wireless-ka… Waan jeclahay fikraddaas oo ah inaan taleefankaaga ka qaban waayo mar walba si aan u eego fariimahaaga ama emaylkaaga, waa inaad curcurkaaga u jeedisaa.
Xaaladdan oo kale, way ogyihiin la qabsadaan tikniyoolajiyad mustaqbal leh naqshad qaababka caadiga ah gaballo quruxsan. Uma maleynayo inay naga caawin doonto inaan ka tagno taleefankeena gacanta guriga oo aan yareyno ku tiirsanaanta casriga, laakiin runtii waa wax aan caadi aheyn. Suudh, shaati, a set yar si khafiif ah loogu soo oogo ayaa noqon doonta waxa ugu fiican ee ka dhigi kara smartwatch-kaaga cusub inuu soo baxo.
UP24 waxaa qoray Jawbone
Tani waa mid ka mid ah jijimooyin badan oo ballan qaadaya hagaajiyo nolosheena maalin kasta naga caawiya inaan caafimaad qabno. Waxay cabirtaa sida aan u seexanno, waxa aan soconno, iyo kalooriyada aan cunno. Si tan loo sameeyo, waa inaad haysataa jijin ku xiran taleefankaaga casriga ah. Horeba waa loo heli karaa waxaanan saadaalinayaa inay ka mid noqon doonto hadiyado waaweyn this Christmas.
Waxay umuuqataa wax badan sida jijimooyin caag ah oo aad moodo dhowr sano ka hor (argg ...) laakiin leh naqshad yar iyo midabbo asal ah oo aan ku siin doonin sawirkaas farsamada qalabka geek. Waa wax yar, miyir leh, ma leh shaashad ... Hadda, waxaan hubaa in si ay waxtar u yeelato ay tahay in la xidho 24 saacadood maalintii. Haddii saaxiibkaaga moodada ah, marwalba aad ka daasho xirashada isla saacadda si kasta oo ay u qurux badan tahay una qaali tahay, waad dhameyn doontaa daallan inaad had iyo jeer xirto curcurka.
Isku soo wada duub si kastaba ha noqotee, ma jiri doonto dhibaato badan. Waxay leedahay muuqaal fudud oo isboorti ah oo si fiican ula socon doona wax kasta oo dhar ah oo aan caadi ahayn sida jaakad bambo leh oo leh shaati cad ama jooniska caadiga ah iyo isugeynta funaanadaha.
Xukunkeygii ugu dambeeyay:
Had iyo jeer waan ka shakisanahay, maanta waxaan isku dayayaa inaan sii wado maskax furan Hadana dhib iguma aha aniga inaan arko in dharka la gashado uu noqon doono mid guud. In kasta oo qaar badan oo ka mid ahi ayan weli gaarin Isbaanish, haddana waxaa goor dhow na weerari doona qormooyin iyo xeelado siyaabo ah oo la isugu geeyo oo loogu daro waxyaabahaas qolka labiska. Ku naqshado waa la sifeyn doonaa shakigana kama qabo taas guryaha moodada waaweyn waxay bilaabi doonaan inay fikradahooda ku soo bandhigaan saacado casri ah. Ama laga yaabee inaysan ahayn, oo waxyaabahan oo dhan waxay ku dhamaan doonaan sida culeysyadayda oo ku jira sanduuq ku yaal dhabarka armaajo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Isbeddellada » Ma waxay isku darayaan teknoolojiyada cusub dharkaaga?
Dharka dharka dhogorta leh, isbeddelka xilligan